Bacriminta Xirfadleyda Urea Mashiinka Mashiinka Mashiinka Jebiya iyo Warshad | YiZheng
Ku Bacriminta Urea Granules Mashiinka Mashiinka waa nooc ka mid ah mashiinka burbura ee la hagaajin karo oo aan lahayn shaashad shaashad loogu talagalay iyada oo ku saleysan nuugista qalabka wax lagu burburiyo ee wanaagsan ee gudaha iyo dibedda. Waa mid ka mid ah qalabka si ballaaran loogu codsan karo in lagu burburiyo bacriminta waana shey shati u leh shirkadeena.
Waa maxay Mashiinka Xashiishadda Bacriminta Urea?
1. Bacriminta Urea Crusher Mageed badanaa waxay isticmaashaa shiidida iyo goynta farqiga u dhexeeya rullaluistemadka iyo saxanka gogosha leh.
2. Cabbirka nadiifinta ayaa go'aaminaya heerka walxaha burbursan, iyo xawaaraha durbaanka iyo dhexroorku waa la hagaajin karaa.
3. Yuuradu markay jidhka gasho, waxay ku dhacdaa gidaarka jidhka iyo bajaajka wayna jajabtaa. Kadibna waxaa lagu budeynayaa budada inta u dhexeysa rullaluistemadka iyo saxanka gogosha leh.
4. Nadiifinta saxanka gogosha leh waa in lagu hagaajiyaa ilaa inta uu ku burburayo habka xakamaynta inta u dhexeysa 3-12 mm, iyo jaangooyaha dekedda quudinta ayaa xakamayn kara mugga wax soo saarka.
Kahor isticmaalka, dhig meesha Bacriminta Urea Crusher Mageed meel gaar ah oo aqoon isweydaarsiga ah kuna xir isha korontada si loo isticmaalo. Ganaaxa jilitaanka waxaa xukuma kala dheereynta labada rolle. Yaraynta farqiga, ganaaxa ganaaxa, iyo yareynta qaraabada ee soo saarista. Markasta oo ay sifiican u saameyneyso iskudhafka pulverization-ka ayaa ah, waxsoosaarka sareeyaa. Qalabka waxaa loo qaabeyn karaa inuu ahaado mid mobiil ah marka loo eego shuruudaha isticmaalaha, isticmaaluhuna wuxuu u dhaqaaqi karaa booska u dhigma markuu isticmaalayo, taas oo aad ugu habboon.
Astaamaha Mashiinka Xashiishadda Bacriminta Urea
1. Gaar ahaan maaddada qoyaanka sare, waxay leedahay codsi adag mana fududa in la xannibo, walxaha soo bixiyaana waa siman yihiin.
2. Mashiinka wax burburaya wuxuu qaataa waxyaabo gaar ah, nolosha adeeguna waa saddex-laab ka badan tahay mashiinka kale ee burburka.
3. Waxay leedahay hufnaan sare burburin; lagu qalabeeyo daaqada wax lagu fiirsado waxay ka dhigeysaa qaybaha xiran inay ku dhameystiraan 10 daqiiqo.
Q1: Waa maxay Faa'iidada Urea Xarunta Bacriminta Xashiishadda?
A1: Hal sano oo dammaanad ah, waxay leedahay nolol adeeg dheer oo ku saabsan hawlgalka buug-yaraheena gacanta.
Q2: Sidee loo dhigaa Dalbashada Burburka Bacriminta Urea Compound?
J2: Waxaad si toos ah uga dalban kartaa khadka tooska ah iyada oo loo marayo Hubinta Ganacsiga, waxaan ku heli doonnaa amarkaaga oo aan isla markiiba ka jawaabno; Ka dib markaad xaqiijiso mashiinka ku habboon oo aad noo dhigto iyada oo loo marayo Hubinta Ganacsiga, waxaan kuu diyaarin doonaa xamuulka waqtigiisa.
Q3: Miyaad aqbashaa amarrada gaarka ah ee OEM ee Burburka Bacriminta Urea Compound?
A3: OEM amarka qaaska ah sidoo kale waa la heli karaa maxaa yeelay waxaan leenahay warshad noo gaar ah, taas oo ah soo saaraha hormuudka u ah arimahan oo leh khibrad 20 sano ah.
Q4: Waa maxay waqtiga dhalmada dhabta ah ee warshadaada?
A4: 5 illaa 7 maalmood oo loogu talagalay alaabada guud ee taxanaha ah, dhanka kale, badeecooyinka dufcadda leh & alaabooyinka loo habeeyay waxay u baahan doonaan 30 maalmood illaa 60 maalmood oo ku saleysan xaalado kala duwan.
S5: Sideed ku xaqiijin kartaa tayada Burburka Bacriminta Urea Compound?
J5: Guud ahaan, qalabkeenu waa nooca ugu adkeysiga badan macaamiisheenna gudaha ama dibedda. Iyada oo kooxdeena khibradda tayada leh, waxaan isku dayeynaa inaan ku siino sheyga tayada ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, waxaan aqoonsan nahay inay jiraan wax yar oo sheyga ah oo laga yaabo inuu cillad yeesho ama u waxyeelo sababo kala duwan.
S6: Sidee ayuu adeeggaaga iibka ka dib u sameeyaa? waxyeello soo gaadhay
J6: Waqtiga dammaanad qaadka ah 24 bilood, adeegeena guud ee iibka kadib wuxuu badalayaa qaybaha burburay, laakiin hadii waxyeelada lagu hagaajin karo qiimo yar, waxaan sugi lahayn biilka macaamilka ee kharashka hagaajinta oo aan soo celinno qaybtaan qiimaha ah. (Fiiro gaar ah: qaybaha xirashada kuma jiraan.)
Ku soo dhowow baaritaankaaga oo soo booqo warshaddeena!
Muuqaalka Muuqaalka Bacriminta Urea Burburka Mashiinka
Bacriminta Urea Burburka Mashiinka Mashiinka
Fogaanta Dhexe (mm)
Bixinta Taranka (mm)
Hore: Mashiinka Dhuxul-Baaburka Mashiinka Mashiinka Laba-geesle ah
Xiga: Kiimikada Bacriminta Qafis Mashiinka Mashiinka